Cawaaqib-xumida Wiilasheena Qabatimay Tuugada Telefoonada Gacanta (Mobile) | Marsa News
Cawaaqib-xumida Wiilasheena Qabatimay Tuugada Telefoonada Gacanta (Mobile)
Hargaisa:(Marsanews) Waxa muddooyinkii u dambeeyey si aad ah ugu soo batay dhammaanba xaafadaha kala duwan ee caasimadda Hargaysa wiilal yar-yar oo xiliyada habeenkii, gaar ahaan waqtiga fiidka ah dadka ka booba amma ka xooga telefoonnada gacanta (Mobiles), iyagoo eegta marka ay telefoonka ku hadlayaan, isla markaana ay marayaan meelaha madaw. Ramadaan ee ina dhaaftay, waxayna dhallinyaradan ku mamay xaqa bani’aadamku ay marba marka ka sii dembeysa sii casriyaynayaan qaadashada mobillada, tabaha iyo xeeladaha ay iminka soo kordhiyeen ayey ka mid tahay inay laba laba ama ilaa afar ama shan kala dembeeya isku bidhaansadaan, kadibna marka qofka socotada ah uu dhexdooda marayo ayay kuwii dhaafay ku soo jeedsanayaan oo qofka markaba hareeraynayaan, kana qaadanayaan telefoonka iyo kolba wixii ay ka helaan.
Bulshada aqoonta leh iyo dadka masuuliyiinta ah waxa ku waajib ah in arrimahaa ay xil buuxa iska saaraan oo wax laga qabto dhibkaas ina taabtay, si aynu ugu gudbino hay’adaha nabadgelyada oo ay wax uga qabtaan ciyaalkan xaaraanta ku mamay, tallaabana looga qaado, isla markaana loo dhaqanceliyo dhallinyarada dhibaya dadka muwaadiniinta ah. Inamada hawlahan ku jirana waxaan kula talin lahaa, maanta ayaad is-qabasho leedahay, haddii kale waxa aad u diyaar-garowdaa in aakhiro iyo iftiinkaba aanay waxba kuu oolin. Meelaha mobillada ama computers-ka la soo xado lagu jabinaya ee lacag ka qaata ama ka sii iibsada waa inay hay’adaha nabadgelyadu wax-ka-qabtaan, iyadoo sidoo kale aan kula taliyo ciidanka booliska inay sameeyaan askar iyo gaadiid roondo ah oo mara xaafadaha caasimadda Hargeysa xilliyada fiidka ah oo ah waqtiga inta badan ay dhallinyaradu dadka dhibaan.